प्रदेश ५ मा डेढ महिनामा ३३ बलात्कार ! - Everest Dainik - News from Nepal
प्रदेश ५ मा डेढ महिनामा ३३ बलात्कार !
नेपालगन्ज, भदौ १३ । प्रदेश ५ मा बलात्कारका घटना डरलाग्दो रुपमा बढेका छन् । गत साउन यता यो प्रदेशका १२ जिल्लामा जबरजस्ती करणीका ३३ वटा घटना भएका छन् । प्रदेश सभासद कृष्णा केसी बलात्कार सामाजिक विकृतिका रुपमा देखिएको बताउँछिन् । जसलाई अशिक्षा, बेरोजगारीजस्ता समस्याले प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
उनले भनिन्, घटनालाई ढाकछोप गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता बढेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । अझ धेरै घटना सार्वजनिक भएका छैनन् । कतिपय घटना परिवारभित्रै लुकाइन्छ । कति प्रहरीकहाँ गएर मिलाउने प्रयास गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा दोषीलाई कम सजाय दिलाउन दबाब पर्छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
साउनयता बलात्कारका घटना बाँके, प्युठान र दाङमा धेरै भएका छन् । बाँके र प्युठानमा समान ६ र दाङमा ५ जबरजस्ती करणी मुद्दा दर्ता भएका छन् । रुपन्देहीमा ४, नवलपरासीमा १, कपिलवस्तुमा २, पाल्पामा ३, रोल्पामा १, रुकुम पूर्वमा १, बर्दियामा ४ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । गुल्मी र अर्घाखाँचीमा जबरजस्ती करणी उद्योगको एउटा पनि मुद्दा दर्ता भएको छैन ।
याे पनि पढ्नुस निर्मला हत्या प्रकरणः प्रहरी नै प्रमाण मेटाउन लागेको आशंका !
ट्याग्स: 33 Rap, Province 5, Rap